के उत्तम वाणिज्य कार्यालय रंग योजनाहरु छ? - Office Color Schemes
Home » के उत्तम वाणिज्य कार्यालय रंग योजनाहरु छ?
के उत्तम वाणिज्य कार्यालय रंग योजनाहरु छ?
तपाईंको अफिसमा रंगहरू यो पप बनाउन भन्दा बढी हासिल गर्न सक्छन्! तपाईंको सर्तको छायांकन योजनाहरूले तपाईंको छवि पूरक साथै कामदारहरूको मुनाफा, प्रेरणा र द्वारा र ठूलो दिमागको राज्य प्रभावित गर्दछ। यी ढाँचाहरूलाई विचार गर्नुहोस् तपाईको कार्यालयको अवस्थालाई आउन धेरै लामो समयका लागि मद्दत गर्न।
अल्ट्रा वायोलेट: प्यान्टोनको वर्षको रंगको साथ घोषणा गर्नुहोस् — अल्ट्रा वायोलेट। बैजनीको दिव्य छायाको बारेमा सोच्नुहोस्, यो तीव्र, अचम्मको छ, र कुनै पनि कोठामा निश्चितता र जीवनशक्तिको भावना दिन्छ। तपाईंको स्थान निष्पक्ष वा उत्कृष्ट छ जस्तोसुकै भए पनि, यो शेड कुनै पनि छायांकन योजनाको साथ जान पर्याप्त लचिलो छ र जोडदार टुक्राहरूको क्रमबद्धमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
नियमित टोनहरू: बायोफिलिक योजनाको साथ, विकासोन्मुख ढाँचा जुन सामान्य संसारको भागलाई काट्ने धारमा भेला हुन्छ अस्थिर अवस्थामा, यो कुनै अप्रत्याशित कुरा होइन कि धनी, प्राकृतिक टोनहरू कार्यालय स्पेसको मिश्रणमा भेटिन्छ। जब तपाईं सामान्य मिश-म्यासको साथ हरियो समावेश गर्नुहुन्छ, तपाईं राहत दिन सक्नुहुन्छ जुन कामदारहरूलाई दिनको अवधिमा व्यस्त र प्रभावकारी रहन सक्षम गर्दछ। केही तन र गाढा रंगको कूल ब्लुजको साथ मिलेको अनावश्यक, आधुनिक वातावरण बनाउन टाढा जान सक्छ।
नाजुक पास्टलहरू: व्यक्तिहरू र संघहरूले मध्यम जीवन शैली अपनाइरहेका छन्, छायाँका ढाँचाहरू जस्तै! आधारभूत, शान्त र colorsहरू, बलौटे गुलाबी र मोती गाढा जस्तै, काटि edge्ग एज, शान्त अवस्था बनाउन सहयोग गर्दछ जुन पुनर्जीवित र विकासको लागि अग्रसर हुन्छ।
अँध्यारो फिर्ता छ: धेरैले आफ्नो भित्री संरचनामा अँध्यारो प्रयोग गर्नबाट जोगिएका छन्, यद्यपि सबै अँध्यारो कोठा रिबाउन्डमा छन्। छायांकन को एक निरपेक्ष आवश्यकता को रूप मा हेरिन्छ तथ्यहरु को प्रकाश मा कि यो सुखद वस्तुहरु, उदाहरण, र सामग्री को एक वर्गीकरण संग मेल खान्छ। भुईं देखि छाना सम्म, अन्धकारले कुनै पनि वातावरण वातावरण सहज, दक्ष र प्रमुख देखिन सक्छ।
गहन र colors्गदेखि शॉर्टसाइट शेडहरूसम्म, हालको बान्कीले तपाईंको एसोसिएसनलाई टाँसिन सक्छ जब मुनाफा सुधार र दिमागको अपग्रेड गर्दै! वाणिज्यिक कार्यालय वातावरणमा, हामी केवल नयाँ स्लन्टि colors र colors्गहरूको अंशमा सामेल हुन सक्दैनौं साथै तपाईंको छविमा फिट हुनेहरू। तपाईले डिभाइडरमा छिचोल्ने बनाउनु पर्छ वा टेक्सचर र डिभाइडर कभरहरूको निर्धारणको साथ शानदार इन्ट्रिमेन्ट समावेश गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको बाबजुद पनि, उदाहरण, सामग्री, र विशेष गरी, छायांकनको माध्यमबाट तपाईको दयालु सम्बन्धको दर्पण गर्न यो आवश्यक छ।
र us्गले हामी सबैलाई असर गर्छ। तिनीहरू प्रत्येक व्यक्तिमा (subliminally) भावनाहरू र भावनाहरू प्रदान गर्छन्। यो कुनै ठूलो आश्चर्यको कुरा होइन कि संगठनहरू र निर्माताहरूले उनीहरूको वस्तुहरू र पसलहरूको लागि सही रंगहरू पत्ता लगाउन विशाल नगदका उपायहरू खर्च गरिरहेका छन्। यो ग्यारेन्टी गर्नाले ग्राहकहरू ती पसलहरूमा लामो समयसम्म रहन्छन् र अधिक महत्त्वपूर्ण रूपमा, खरीद गर्नुहोस्। त्यस्तै तरीकाले, सहि अफिस छाँटका विचारहरू र प्रभावी ढंगले लिइएको अफिस पेन्ट र colors्गले पृथ्वीलाई “स्वागत, प्रेरणा र हौसला प्रदान” गर्न मद्दत गर्दछ। यो, तसर्थ, वृद्धि क्षमता र मद्दत लिफ्ट सौदा गर्न सक्छन्।
नियमित कार्यालयको रोजगारीहरूमा कम्पोजि,, सम्पादन, टेलिफोन उठाउँदा, रेकर्डि। इत्यादिमा विशिष्ट अफिस पेन्ट र colors्गको प्रभावहरूमा धेरै अनुसन्धान गरिएको छ। यसैगरी अनुसन्धानलाई पनि कामदारको समृद्धि, दक्षता, कार्यान्वयन र पूर्तिमा छनौट गरिएको अफिस छाँटका विचारहरूको प्रभाव हेर्न निर्देशन गरिएको छ। यी परीक्षा मध्ये प्रत्येकको लक्ष्य सबै भन्दा राम्रो अफिस पेन्ट रंग र योजनाहरू पत्ता लगाउनु हो जुन विशेषज्ञ समृद्धि र कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन सक्छ विशेष गरी सीमित कार्यालय स्थानहरूमा। प्रत्येक अनुसन्धानले मजदुरहरूको स्वभाव र छनौट गरिएको अफिस छाँटका विचारहरूको बीचको सम्बन्ध प्रदर्शन गरेको छ।
यहाँ सही अफिस पेन्ट रंगहरू छनौट गर्नका लागि मास्टर सिर्जनाकर्ताहरू र शेडिंग थेरापिस्टहरूका केही सुझावहरू छन्।
व्यवसायलाई विचार गर्नुहोस् – तटस्थ रंग योजनाहरू वास्तविक संगठनहरूका लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छन्। त्यो भनिएको छ, कार्यस्थल कोठाका बासिन्दाले पनि आफ्नो चरित्रमा निर्भर कार्यस्थल रंग रंगहरू निर्णय गर्नेछन्। यदि तपाइँ शैलीगत लेआउटमा जीवनशैलीको अनुभूति प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने, न्यानो र जीवन्त र colors्गहरू जस्तै पहेँलो, सुन्तला र छनौट गर्नुहोस् कि उनीहरूले नॉन-ओभरर्भरिंग गर्दै छन् भनेर विचार गरी। अधिकांश भागका लागि फेen शुई शेडिंग विशेषज्ञहरूले कार्यस्थलहरूको लागि पहेंलो रंगको हल्का शेडहरू सुझाव दिन्छ किनकि यी आविष्कार र जानकारी सम्बन्धित मुद्दाहरूको लागि उपयोगी छन्। शान्त प्रभावहरूको लागि, विशेषज्ञहरूले नीलो-हरियो र अन्य प्रकारको शेडहरू सुझाव दिन्छन्। योजनाकारहरू, लेखक र अन्य द्वारा प्रयोग गरिएको कार्यस्थलहरूको लागि, एक पहेंलो, सुन्तला र रातो जस्तो रंगहरू लिन सक्दछ। विशेषज्ञहरूका लागि शान्त ट्यान, ट्यान र ग्रेहरूको उपयोगले साइकलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ र यसका साथै फिक्ससनमा पनि मद्दत गर्दछ। नीलो र हरियो जस्ता कूलर र्गहरू कानुनी सल्लाहकार, बुककीपर जस्ता कामहरूलाई निराश पार्ने सोच्दछन् र यस्तै अगाडि यी सहयोगहरूले अनावश्यक र शान्त हुन्छ।
कोठाको पहुँचतालाई ध्यान दिनुहोस् साना कार्यालय स्थानहरूका लागि, एकले सेन्ट, बेज रंग र विशेष गरी छानाका लागि अफिस पेन्ट रंगहरू लिन सक्दछ किनकि यसले ठूलो कोठाको कल्पना गर्न मद्दत गर्दछ। अर्कोतर्फ, गाढा र colorsहरू विशाल कार्यालय कोठाहरूका लागि उपयुक्त छन् किनकि यसले कोठालाई बढ्दो रूपमा कम र आरामदायक बनाउँदछ।
छायांकन विसर्जनमा फोकस गर्नुहोस् एन्जेला राइट जस्ता रंगीन चिकित्सकहरूले थप छायांकनको विपरित छायांकनको विसर्जनमा चिन्ता गर्दछ। यसको मतलब शेडिंगको बल भनेको कारक हो जुन अधिकतम भागका लागि मजदुरको कार्यान्वयन र आचरणलाई प्रभावित गर्दछ। यी लाइनहरूमा, ठोस र भव्य शेडिंग बढ्नेछ जबकि तल्लो विसर्जनको साथमा हल्का शेडिंग शान्त हुनेछ।
यो विज्ञापन रिपोर्ट गर्नुहोस्
एन्जेला राइटले सिफारिश गरेको अनुसार हामी केहि अविश्वसनीय अफिस शेडिंग विचारहरूको अध्ययन गर्न सक्छौं र तिनीहरूले हामीलाई कसरी हावा दिन्छन्:
निलो दिमागलाई दिमाग बनाउँदछ – एन्जेला राइटले बुकिरहरू वा बिभिन्न विज्ञहरूले संलग्न कार्यस्थलहरूको लागि निलो प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छन् जसले धेरै काम गर्न आवश्यक छ। एन्जेला जस्तोसुकै अवस्थामा पनि मनको कामलाई सन्तुलनमा राख्न र शैलीमा भावनाको एक स्पर्श थप्न मद्दतको लागि नारंगी रंगका स्प्रि withहरू सहित निलो प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छ।
पहेंलो भावनाहरूलाई उत्साह दिन्छ – यो आदर्शवादी छायांकनले पूर्ण अफिस पेन्ट रंगहरूको लागि बनाउँदछ किनभने यसले आत्मालाई विवेक प्रदान गर्दछ। यो फैशनर र बिभिन्न क्षेत्रहरूको लागि उपयुक्त छ जहाँ नवीनता आवश्यक छ।
हरियो शेष रकमको लागि हो your तपाईको अफिसको छायांकनका विचारहरूमा हरियो प्रयोग गर्नुहोस् जहाँ विशेष गरी जहाँ नगद नै हातहरू परिवर्तन हुँदैछ। हरियो समानता, शान्त र सान्त्वना ल्याउँछ।
रातो प्रभाव शरीर। रातो शारीरिक गुणवत्ता र अपग्रेड देखाउन मद्दत गर्दछ। यो पुन: केन्द्रहरू, कार्यस्थलहरूको लागि उपयुक्त छ जहाँ अस्थायी कामदारहरू र विकासकर्ताहरूले काम गर्छन् वा ग्राहकहरूलाई भेट्छन् र विभिन्न स्थानहरूमा जहाँ कसैलाई सामाजिक वा लोक्वास वातावरण आवश्यक पर्दछ।
तपाईंको अफिस पेन्ट र colors्गहरू छान्दा महत्वपूर्ण सम्झनाहरू
त्यहाँ कुनै अफ-बेस अफिस पेन्ट रंगहरू छैनन् यो ती माध्यमहरू हुन् जुन तपाईं तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो।
कुन रंगलाई तपाईलाई रंग बनाउन आवश्यक छनौट गर्नुहोस्: दिमाग / शरीर / सन्तुलन / भावनाहरू।
एक विशेष छाया छान्नुहोस् र त्यसपछि छनौट गर्नुहोस् कति अपवाद वा नम्र भिजेको तपाईंलाई चाहिएको छ।
र sec्गहरू एकान्तमा अवस्थित हुँदैन तिनीहरू विभिन्न र byहरू समावेश भएको बेलामा उत्तम काम गर्दछन्।
यी शीर्ष कार्यालय रंग र of्ग र कार्यालय छाँटका विचारहरु को एक जोडी हो जुन तपाईं श्रमिकहरुको भावना समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो सम्झौता सुधार गर्न सक्नुहुन्छ।
White Color Curtain Goes With Greig
Add Color To White Bathroom With Li
Basement Paint Color Ideas With Dar
Gray House White Trim Black Shutter